Aripiko Benito Pérez Galdós? | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo waBenito Pérez Galdós.
Avo vane vana vari pakati pemakore gumi nematatu nemanomwe ekuberekwa vanenge vazviona kuti Benito Pérez Galdós anyangarika kubva pachikoro chedzidzo. Vadzidzi havacha dzidze basa ravo mukirasi yezvinyorwa uye zita ravo, mune yakanakisa kesi, rinongowanikwa pane runyorwa rwevanyori vakakosha.
Chinhu chinobonderana nezvakaitika zvisati zvapfuura munhoroondo yedu yekudzidzisa. Paive nenguva apo vese vadzidzi vakaverenga, semuenzaniso, mamwe emabhuku ari e "National Episodes".
Anoshuva mubairo weNobel Prize wemabhuku haana kungotorwa chete mubhuku rake nhoroondo inoshamisa yezviitiko zvekare asi zvakare, aine akakwana manyorero eCervantine Ini ndinogadzira zvinyorwa zvechokwadi zvinokodzera kumuisa pakati pevanyori vatatu vakanyanya munhoroondo yemutauro wechiSpanish.
Zvisinei, hapana anoverenga mabhuku ake futi. Mune mawonero angu, mamiriro ezvinhu aya anobva mukuyedza kushanduka kwedzidzo kuenda kuchimiro chemazuva ano. Yemazuva ano iri, kure nezvinyorwa zvekudzidzisa zvakambogadzirwa muzvikoro.
Iyi shanduko, inodikanwa uye yakanaka mune zvakawanda zvinhu nekuda kwekushanduka kwenzanga yedu, Akaita kuyedza kunotyisa kupfuura Pérez Galdós. Kuregeredza iye nekuda kwekufunga kusanzwisisika kwebasa rake sechinhu chakamisikidzwa munguva yakapfuura kana, zvakatoipisisa, chimwe chinhu chekunyika chiri padhuze nefascism.
Uye ndinoti vekupedzisira neruzivo rwechokwadi sezvo, kanopfuura kamwechete, vanhu vazhinji "vane mukurumbira" vakagadzira dzidziso yakashata yakadai nekuti, mukati memakore eFranco, "zvikamu zvenyika" zvakaonekwa pane ajenda vadzidzi uye kudzidza kwavo kwaitomanikidza.
Neiyi nzira uye sezvazvinoitika nezvitsauko zvakawanda zvenhoroondo, vechidiki venyika ino vari kunyimwa kuvapo kwemunyori anoshamisa uye rakasarudzika basa rekunyora. Kuwedzera, nenzira iyi, kusaziva kwenzanga yedu uye kukanganwa zvese zvinofanirwa kuremekedzwa uye kukosheswa.
Saka zvakanaka zvinosuruvarisa Benito Pérez Galdós anoenderana nemudzidzisi asinganzwisisike, anozvitutumadza uye akashonga zvombo uyo, muchiito chekupenga kusati kwamboitika, anosarudza kuenda kwaano rongerwa nazvino uye, semhare yezvinyorwa, anorwisa zvisina musoro nekupa vadzidzi vake bhuku "Gerona", "Trafalgar", "Zaragoza", "Miau" kana iro basa rounyanzvi rine zita rekuti "Fortunata y Jacinta".
Zvinotoshamisa kuti izvi ndizvo zvega zvinoita kuti munyori weCanarian adzidzwe kuSpain. Zvirokwazvo, zvisina maturo izvo mumaonero angu zvinoratidza, pamwe nezvimwe zvinhu zvakawanda, dambudziko rinounzwa nenyika ino muzvinhu zvedzidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Aripiko Benito Pérez Galdós?
Galdós haana kumbobvira akunda Nobel.
Ichokwadi, izvozvi ndinorangarira kuti akafanirwa kuitirwa asi pakupedzisira haana kuigamuchira. Ndatenda neruzivo. Zvisinei, zvikonzero zvaisazoshayikwa kuti ave nehehe imwe